Hdmi Extender, Hdmi Switcher, Wireless 4k Hdmi Extender - Vondron'ny Brocade
Brocade Smart Space Technology Co., Ltd. dia orinasa lehibe voasoratra anarana ao amin'ny Faritanin'i Sichuan, Sina, ary ampahany amin'ny programa fampiasam-bola lehibe an'ny High Tech Zone any Chengdu. Ny vokatray dia mazàna no ahitana ireo mpandova horonantsary sy famaritana avo lenta ary vokatra famindrana fotoana maharitra tsy manimba lavitra.
Teknolojia fototra mahaleo tena mitarika indostrialy sy fahaiza-manao fikarohana maharitra ary fampandrosoana, miaraka amina patanty famoronana maro sy vokatra vaovao misy patanty. Fampivoarana teknolojia fandefasana feo sy horonantsary farany famaritana an-tsary toy ny famaritana avo, vahaolana avo lenta, fanemorana zero, fanjifana herinaratra ambany, halavirana lavitra, sns.
Ny vokatra Brocade Zhizhi series dia misy famindrana fotoana maharitra tsy voafaritra tsara, ary koa fanovana sy fizarana horonantsary sy famaritana avo lenta. Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny audio-visual HDMI, fampianarana haino aman-jery, kaonferansa horonantsary sy telefaona, fampisehoana an-tsarimihetsika lehibe, fampirantiana, fikarohana ara-bola sy siantifika, ary horonan-tsary Shooting sy faritra mitsangana hafa.
Noho ny fitomboana haingana amin'ny fangatahana fangatahana sary ho an'ny sensor CIS, chip PMIC fitantanana herinaratra, puce famantarana famantarana ny rantsan-tànana, chip Bluetooth, chip fahatsiarovana manokana, sns., Mafana ny baiko omana wafera 8-inch. Raha ny voalazan'ny Securities Times, miaraka amina fanombohana miadana finday 5G, ny fangatahana ...
Brocade Group dia naneho ny tsenambarotra Cloud-Central sy Atsinanana eropeana ara-toekarena sy varotra Cloud Fair ary Chengdu Cloud Cloud manokana
Tamin'ny faha-28 Oktobra dia notanterahin'i Chengdu tamim-pahombiazana ny foara ara-toekarena sy varotra sinoa-afovoany sy atsinanana eropeana ary varotra rahona manokana any Chengdu. Ity hetsika ity dia ampahany lehibe amin'ny fampirantiana dizitaly varotra iraisam-pirenena sinoa-eropeana ...
Mikendry ny hanangana orinasa manavao kilasy voalohany.